Kooxaha Lazio,Fiorentina,Torino,AC Milan iyo Sassuolo oo Guulo Gaaray – Radio Muqdisho
Kooxaha Lazio,Fiorentina,Torino,AC Milan iyo Sassuolo oo Guulo Gaaray
Kooxda Cagliari ayaa waxaa garoonkeeda Stadio Sant’Elia 1-3 uga badiyay kooxda Lazio.
Kooxda Lazio ayaa waxaa sedaxda gool u kala dhaliyay ciyaaryahanada kala ah Miroslav Klose, Lucas Biglia iyo Marco Parolo.
Ciyaaryahan Modibo Diakite ayaa qeybtii danbe ee ciyaarta kaarka casaanka ah ka qaatay kooxda Cagliari.
Kooxda Lazio ayaa badisay kulankii todobaad oo xiriir,waxana ay dooneeysaa in ay sanadkan u soo baxdo koobka qaarada yurub ee Champions League-ga.
Kooxda Lazio ayaa kaalinta sedaxaad uga jirto horyaalka talyaaniga,waxana ay leedahay 55-dhibcood,halka kooxda Cagliari ay kamid tahay sedaxda kooxood ee horyaalka ugu hooseeya.
Kooxda Fiorentina ayaa garoonkeeda Stadio Artemio Franchi 2-0 uga badisay kooxda Sampdoria.
Kooxda Fiorentina ayaa waxaa qeybtii danbe ee ciyaarta labada gool u kala dhaliyay ciyaaryahanada kala ah Alessandro Diamanti iyo Mohamed Saleh.
Kooxda Fiorentina ayaa kala horeynta horyaalka talyaaniga uga jirto kaalinta afaraad,waxana ay leedahay 49-dhibcood,halka kooxda Sampdoria ay horyaalka uga jirto kaalinta shanaad,iyadoo leh 48-dhibcood.
Kooxda Atalanta ayaa waxaa garoonkeeda Atleti Azzurri d’Italia 1-2 uga badiyay kooxda Torino.
Kooxda Torino ayaa waxaa qeybtii hore ee ciyaarta labada gool u kala dhaliyay ciyaaryahanada kala ah Fabio Quagliarella iyo Kamil Glik.
Ciyaaryahan Mauricio Pinilla ayaa goolka kaliya u dhaliyay kooxda Atalanta,waxana dhamaadkii ciyaarta uu qaatay kaarka casaanka ah.
Ciyaaryahan Migjen Basha ayaa sidoo kale dhamaadkii ciyaarta kaarka casaanka ah ka qaatay kooxda Torino.
Kooxda Torino ayaa kala horeynta horyaalka talyaaniga uga jirto kaalinta todobaad,waxana ay leedahay 42-dhibcood,halka kooxda Atalanta ay horyaalka uga jirto kaalinta 17-aad,iyadoo leh 26-dhibcood.
Kooxda Palermo ayaa waxaa garoonkeeda Stadio Renzo Barbera 1-2 uga badiyay kooxda AC Milan.
Kooxda AC Milan ayaa waxaa labadii qeyb ee ciyaarta labada gool u kala dhaliyay ciyaaryahanada kala ah Alessio Cerci iyo Jeremy Menez.
Kooxda AC Milan ayaa gaartay guushii u horeysay oo ay meel garoonkeeda ka baxsan ku soo gaarto ilaa bartamahii October ee sanadkii hore.
Kooxda AC Milan ayaa kala horeynta horyaalka talyaaniga uga jirto kaalinta sideedaad,waxana ay leedahay 41-dhibcood,halka kooxda Palermo ay horyaalka uga jirto kaalinta 11-aad,iyadoo leh 35-dhibcood.
Kooxda Inter Milan ayaa garoonkeeda San Siro barbardhac 1-1 ah kula gashay kooxda Parma.
Kooxda Inter ayaa goolka la hor martay,waxaana daqiiqadii 25-aad ee ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahan Fredy Guarin.
Ciyaaryahan Andi Lila ayaa dhamaadkii qeybtii hore ee ciyaarta goolka bareejada u dhaliyay kooxda Parma.
Taageerayaasha kooxda Inter Milan ayaa ku oriyay ciyaartoyda kooxdooda,ka dib markii ay dhamaatay ciyaarta.
Kooxda Inter Milan ayaa kala horeynta horyaalka talyaaniga uga jirto kaalinta sagaalaad,iyadoo leh 38-dhibcood,halka kooxda Parma ay horyaalka ugu hooseeyso.
Kooxda Sassuolo ayaa garoonkeeda Stadio Citta del Tricolore 1-0 uga badisay kooxda ChievoVerona.
Ciyaaryahan Domenico Berardi ayaa daqiiqadii 23-aad ee qeybtii hore ee ciyaarta goolka guusha oo rigoore ahaa u dhaliyay kooxda Sassuolo.
Ciyaaryahan Federico Peluso ayaa qeybtii danbe ee ciyaarta kaarka casaanka ah ka qaatay kooxda Sassuolo.
Kooxda Sassuolo ayaa kala horeynta horyaalka talyaaniga uga jirto kaalinta 12-aad,waxana ay leedahay 35-dhibcood,halka kooxda ChievoVerona ay horyaalka uga jirto kaalinta 16-aad,iyadoo leh 32-dhibcood.k
DAAWO SAWIRRADA XUSKA WARBAAHINTA QARANKA
Wasiirka Arrimaha Dibadda oo ku qaabilay Xafiiskiisa Sii-hayaha Safaaradda Uganda ee Soomaaliya “Sawirro”
Wasiirka Arrimaha Dibadda oo ku qaabilay Xafiiskiisa Sii-hayaha Safaaradda Uganda ee Soomaaliya "Sawirro"